Global Voices teny Malagasy » RV Newsletter: Manatevin-daharana hetsika hanasongadinana ny vehivavy ao amin’ny Wikipedia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Marsa 2019 5:24 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sary avy amin'ny Whose Knowledge? Sary azo jerena araka ny lisansa CC BY-SA 4.0.
Fanamarihan'ny Rising Voices: Ny taratasim-baovaontsika mpivoaka indroa isam-bolana dia manome famintinana ireo lahatsoratra bilaogy vao haingana mikasika ny lafiny rehetra amin'ny fampidirana nomerika, anisan'izany ny fidirana sy ny fandraisana fitaovana nomerika, ary koa ny fomba samihafa sy ny fahafahana ho an'ny fiarahamonina mba handray anjara mavitrika amin'ny aterineto. Vakio eto  raha hijery ireo fivoahana teo aloha amin'ity taratasim-baovao ity.
Niverina ny hetsika #VisibleWikiWomen taorian'ny hetsika voalohany nahomby tamin'ny herintaona. Ny tanjony voalohany dia ny hanomezana loharanom-baovao “manasongadina ireo lahatsoratra avy amin'ny vehivavy ao amin'ny Wikipedia izay tsy ahitana sary.”
Narindran'ny WhoseKnowledge? miaraka amin'ireo fikambanana mpiara-miasa sy mpiara-miombon'antoka am-polony, mikatsaka ny hampitombo ny isan'ny sary azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana malalaka ao amin'ny Wikimedia Commons, sy ny tahiry an-tserasera momba ireo angon-drakitra amin'ny fampitam-baovao marolafy izany. Manasa ireo mpandray anjara ny hetsika mba hamoaka na hanome sary antenaina hahatratra 1600 farafahakeliny, sary ahitana vehivavy misongadina. Manomboka amin'ny 8 marsa ny fandraisana anjara ary mitohy hatramin'ny 8 Mey. Jereo ato ny fomba ahafahanao mandray anjara.
LAHATSORATRA BEBE KOKOA AO AMIN NY BILAOGY RISING VOICES
Amin'ny alalàn'ny fiaraha-miasa amin'ny Association for Progressive Communications (APC), tohizan'ny Rising Voices hatrany ny manome votoaty mifandraika amin'ny fidirana antserasera sy ny fandraisana anjara amin'ny aterineto ho an'ny mpamaky Rising Voices. Ireo lahatsoratra farany ohatra dia ahitana famoahana indray ny tatitry ny firenena roa avy amin'ny Global Information Society Watch (GISWatch) farany izay mifantoka amin'ny tambajotram-piarahamonina, izay nofaritana ho “tambajotram-pifandraisana izay ny olom-pirenena no nanangana azy, no tompony sy miasa ary miserasera aminy amin'ny alalan'ny fifarimbonana sy ny fisokafana.” Amin'ity izahay manasa anao hijery akaiky ny lohahevitra tambajotram-piarahamonina any Costa Rica  sy Shina ..
Fantaro bebe kokoa i Onésimo Cruz Mejía , mpitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas nandritra ny 25 Febroary hatramin'ny 3 martsa 2019 tamin'ny hetsika media sosialy mifantoka amin'ny fahasamihafan'ny fiteny an-tserasera. Mizara amintsika ny toetry ny fiteniny ankehitirny izy (Tu'un Savi, karazana mixteco), ezaka natao tamin'ny famerenana ilay fiteny, ary koa ny antony nanosika azy ho mpikatroka nomerika ho an'ny teny indizeny.
Manome fampianarana antserasera momba ny fanaovan-gazety ara-maso  ny Knight Center for Journalism any Amerika. Hifantoka amin'ny sary vanim-potoana nomerika avy amin'ny tarazo mahaolombelona ity fampianarana ity. Maimaim-poana ho an'ny rehetra ny fampianarana. Faharetany: 4 Martsa – 31 Martsa 2019
FIFANINANANA & FIFANINTSANANA
Miantso hivoahan'ireo tantara ny “Indigenous Youth Storytellers Circle: Share Your Story with the World,” (Faribolan'ny Tanora Tompotany mpilaza tantara: Zarao amin'izao tontolo izao ny tantaranao ): tetikasa ofisialin'ny Terralingua tafiditra ao anatin'ny Taonan'ny Firenena Mikambana hanandratana ny Teny Indizeny (# IYIL19)! Raha zatovo indizeny (18-25 taona) ianao, dia hevero ity varavarana misokatra ity hamoahana ny tantaranao an-tserasera na/sy ao amin'ny Gazetiboky Langscape an'ny Terralingua mba ho hitan'ny mpijery manerantany. Fara-fandraisana: 1 Jona ho an'ny Asara 2019 ary 1 Oktobra ho an'ny Asotry 2019
HETSIKA SY FIHAONAMBE HOAVY
Ho avy ny Fiarahamiasa Fampandrosoana manoloana ny Hantsana Nomerika na Partnership for Progress on the Digital Divide (PPDD) 2019! Raha te-hanolotra ny asanao ianao mandritra ny fihaonambe na hanome Taratasim-panazavana hahatafiditra ny asa-soratrao ao amin'ny E-Book PPDD 2019, dia jereo ity  ary vakio ny torolalana momba ny fanolorana ny asanao. Fara-fandraisana: 18 martsa 2019 amin'ny 11:59 hariva. (Ora ao Hawaii)
Miantso ireo hanao tolo-kevitra atrikasa amin'ny lohahevitra laharam-pahamehana telo ny Fihaonana fanao Isan-taona faha-14 amin'ny Tsenan-dresaka Fitantanana ny aterineto (IGF 2019) dia : 1) Fitantanana tahiry; 2) Fampiatiana nomerika; ary (3) Filaminana, Fiarovana, Fitoniana & Fiaretana. Tsidiho ny tranonkalan'izy ireo  raha hijery fanazavana fanampiny. Fara-fandraisana: 12 Aprily 2019 amin'ny 23:59 (UTC)
FIHAINOANA FANAMPINY MOMBA NY FAMPIATIANA NOMERIKA SY NY FANDRAISANA ANJARA ANTSERAERA
I laughed So Hard I Cried (Nihomehy mafy aho nitomany aho)  — fizarana voalohany amin'ny “Plays Well with Others (Milalaova tsara miaraka amin'ny hafa)” — fandraketam-peo vaovao momba ny zava-kanto sy ny siansan'ny fiarahamiasa, atolotry Creative Commons, ary ampiantranoin'i Ryan Merkley Filoha Tale Jeneralin'ny Creative Commons ho anao. Henoy!
“Ask for what you want (Anontanio izay tianao) ”: paikady momba ny fanesorana ny fomba fihevitra tokana amin'ny aterineto nosoratan'i Sydette Harry  — ny fizarana faharoa amin'ny fandraketam-peon'i Whose Knowledge? , andiana tafatafa sy ezaka fanarahamaso tamin'ny Valan-dresaka momba ny Fanesorana ny Endrim-panjanahantanin'ny Aterineto (Decolonizing the Internet Conference) . (Fizarana fanampiny: tsindrio eto )
Misorata anarana ao amin'ny 
Misaotra manokana an'i Yanne C nanampy tamin'ny fanoratana ity newsletter ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/13/135925/
 Vakio eto: https://rising.globalvoices.org/blog/category/newsletter/
 ato : https://whoseknowledge.org/initiatives/visiblewikiwomen-2019/
 Costa Rica: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/02/24/how-the-cooperative-model-might-serve-an-organisational-model-for-community-networks-in-costa-rica-and-beyond/
 Fantaro bebe kokoa i Onésimo Cruz Mejía: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/02/24/presentamos-a-onesimo-cruz-mejia-anfitrion-de-la-semana-25-de-febrero-al-3-marzo-para-actlenguas/
 fampianarana antserasera momba ny fanaovan-gazety ara-maso: https://journalismcourses.org/FOTO0219.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Photography+MOOC++Sign+up+now&utm_campaign=Visual+Journalism+2019
 “Indigenous Youth Storytellers Circle: Share Your Story with the World,” (Faribolan'ny Tanora Tompotany mpilaza tantara: Zarao amin'izao tontolo izao ny tantaranao: http://www.terralinguaubuntu.org/Langscape/Volume_8/indigenous-youth-call-for-stories
 jereo ity: http://www.ppdd.org/conferences/ppdd2019/cfp/
 Tsidiho ny tranonkalan'izy ireo: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-call-for-workshop-proposals-0
 I laughed So Hard I Cried (Nihomehy mafy aho nitomany aho) : https://playswellwithothers.org/
 “Ask for what you want (Anontanio izay tianao) ”: paikady momba ny fanesorana ny fomba fihevitra tokana amin'ny aterineto nosoratan'i Sydette Harry: https://whoseknowledge.org/ask-for-what-you-want/
 Valan-dresaka momba ny Fanesorana ny Endrim-panjanahantanin'ny Aterineto (Decolonizing the Internet Conference): https://whoseknowledge.org/decolonizing-the-internet-conference/
 Misorata anarana ao amin'ny: http://eepurl.com/KfX8b
 Yanne C : https://community.globalvoices.org/author/yanne-times/